Best Exercises To Increase Height (အရပ်ရှည်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းများ) | Moe Naymin
Best Exercises To Increase Height (အရပ်ရှည်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းများ)
Height plays an important role in enhancing the personal of an individual. No doubt, people are always desperate to increase their height in any way possible. Nowadays,anumber of medicines and acupressure treatments are available which claim height gain. But, these are quite expensive and have associated side effects. Moreover, there is no 100% guarantee of success for these methods.
Thus, the best possible way to increase height is naturally combining an exercise routine with the right diet. Proper exercise helps in toning and strengthening your muscles, releasing the growth hormones which are responsible for height gain. Proper diet keeps these hormones fresh and active and helps in rebuilding themselves.
Exercises To Gain Height:
Though it isawell-known fact that the vertical body height is determined by genetic factors, it can be even influenced to an extent by physical factors like diet and exercise. Mostly, growth stops after the onset of puberty when the growth plates in the long bones in our body get fused. However, growth still continues for some people even at the age of 22-25 and so, it is possible to addafew inches to your height even after this stage by resorting to exercise to increase height.
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အရပ်ဟာလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်သွင်ပြင်ကို များစွာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် ဆေးများ၊ တရုတ်ရိုးရာ အပ်စိုက်နှိပ်နယ်ခြင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ထိုအရာများသည် ဈေးကြီးပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အရပ်သည် မျိုးရိုးနှင့် ဆိုင်သည်ကို အားလုံး နားလည်သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရပ်ကို လေ့ကျင့်ခန်း အစားအသောက်ဖြင့် အနည်းငယ် ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကို ငြင်းစရာမရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အရပ်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အရိုးများ ရင့်ကျက်ပြီး သူတို့၏ ကြီးထွားမည့်နေရာများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကပ်သွားသည့်အခါ အရပ်မရှည်တော့ပါ။ သို့သော်လည်း တစ်ချို့လူများတွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့်တိုင်အောင် အရပ်အနည်းငယ် ရှည်နိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများက သင်၏ အရပ်ကို လက်မအနည်းငယ်ထက် ရှည်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
1. Bar Hanging:
Gravity adversely affects your height by compressing your spines and joints, which squeezes and thins the cartilage, giving youashorter appearance. Hanging onavertical bar isasimple way to combat this problem. Hanging makes the lower torso’s weight stretch the spine and decreases the pull on the vertebras. This results in increasing the height by 1 to2inches, but not instantly.
ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကြောင့် သင်၏ ခါးရိုးနှင့် အရိုးအဆစ်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ညက်နေပြီး အရပ်ပုသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ဘားကို တွဲလောင်းခိုခြင်းသည် ထိုကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကို ပြောင်းပြန်သက်ရောက်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်သောအခါ လက်အားကို သုံးပြီး အပေါ်သို့ ဆန်တတ်၍ ဘားခိုခြင်းထက် တွဲလောင်းခိုခြင်းက အရပ်ရှည်ခြင်းအတွက် ပို၍အထောက်အကူပြုပါသည်။ မှတ်ချက် - ဘားတန်းသည် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အလွယ်တကူဆန့်နိုင်သော အမြင့်တွင် ထားရပါမည်။ အကယ်၍ ဘားတန်းသည် သင့်အရပ်နှင့် မလွတ်ဘူးဆိုလျင် သင့်ဒူးခေါင်းကို ကွေး၍ ဖြည်းဖြည်းချင်း တွဲလောင်းခိုနိုင်ပါသည်။ သင်ဘားခိုနေတဲ့အချိန်မှာ သင်၏လက်က မျက်နှာ၏အရှေ့ဘက်သို့ ဦးတည်နေရပါမည်။ ဘားခိုနေစဉ်မှာပဲ သင်၏လက်၊ ပုခုံး အားလုံး ဖြေလျော့ရပါမည်။ ပိုပြီးထိရောက်လိုလျင် ခြေကျင်းဝတ်နားကို အလေးတုံးများတပ်ဆင်၍ ဘားခိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့တစ်ခါတွဲလောင်းခိုလျင် စက္ကန့် ၂၀ လောက် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘားတွဲလောင်းခိုခြင်းသည် သင်၏အရပ်ရှည်ဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။
2. Dry Land Swim:
This exercise is also known as “alternate kick” and it basically focuses on your lower back.
Start off by laying down flat on your stomach. Your body should be fully extended. Place your arms straight in front of you with your palms facing down towards the floor. Then raise your left arm higher than your right arm. Keeping your legs straight, lift your right leg as far off the ground as you can into the air. Remain in this position for at least4seconds and then repeat the procedure with your other leg and other hand. You should aim to hold the position for 20 seconds. Adding wrist and ankle weights will be more beneficial as it will tone your lower back muscles and increase your resistance.
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် သင်၏ခါးအောက်ပိုင်းကို အသုံးပြုပြီးတော့ ခြေထောက်တစ်လှည့်စီ လှည့်ကန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်ရမှာက သင် ၀မ်းလျားမှောက်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အပြည့်အ၀ဆန့်ထားရပါမည်။ သင်၏လက်ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်တည့်တည့် ပုံပါအတိုင်းထားရပါမည်။ ထို့နောက် သင်၏ဘယ်ဘက်လက်ကို ညာဘက်လက်ထက်မြင့်အောင် မြှင့်တင်ရပါမည်။ ခြေထောက်များကို တစ်ဖြောင့်တည်း ဆန့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံပါအတိုင်း သင်၏ ညာဘက်ခြေထောက်ကို မြေကြီးနှင့် တတ်နိုင်သမျှဝေးအောင် ဆန့်ထုတ်ရပါမည်။ ထိုပုံစံအတိုင်း လေးမိနစ်ခန့်ထားပါ။ ပြီးလျင်နောက်တစ်ဖက်နှင့် ပြန်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်လျင် စက္ကန့်နှစ်ဆယ်ခန့် ထားရပါမည်။သင်၏ လက်ကောက်ဝတ်နှင့်ခြေကျင်းဝတ်များတွင် အလေးတုံးများကပ်ထားခြင်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေစေပါသည်။
3. Pelvic Shift:
Being extremely simple, this exercise helps in stretching your body up and down from the spine and also your hips.
ပုံပါအတိုင်း ထိုင်ပြီးတော့ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှ ခါးဆီသို့ ၊ ခါးမှတင်ပါးဆီသို့ ဆွဲဆန့်ပါ။ ပထမဆုံးသင်က သင့်၏ကျောကို မြေကြီးနှင့်ထိအောင် ပတ်လက်လှန်အိပ်ပါ။ သင်၏ ပုခုံးနှင့်လက်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထားပါ။ သင်၏ ဒူးခေါင်းကွေးပြီးတော့ ပုံပါအတိုင်း တင်ပါးနှင့်ခြေဖနောင့်ထိအောင် တတ်နိုင်သလောက် ဆွဲတင်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆွဲတင်ထားသော ပုံစံအတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ ၊ ၃၀ ခန့်ထားပါ။
4. Cobra Stretch:
This yoga exercise is intended to stretch your spine, thus making it supple and flexible. It is beneficial for the growth of the cartilage between your vertebrae, causing an increase in your vertical height. Lie on the floor with your face down and palms on the floor under your shoulders. Arch your spine up leading your chin also to form an elevated angle. Arch back as far as possible. At least 3-4 reps should be done with each repetition lasting between5to 30 seconds.
၄။ မြွေဟောက်ကဲ့သို့ ဆွဲဆန့်ခြင်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက သင်၏ခါးရိုးကို အဓိက ဆွဲဆန့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ခါးရိုးရှိ အရိုးနုလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားခြင်းကို အထောက်အကူပြုပြီးတော့ သင့်အရပ်ကို ရှည်စေပါသည်။ ပထမဦးဆုံး သင်မျက်နှာကို ကြမ်းပြင်နှင့်ထိအောင် ၀မ်းလျားမှောက်ပါ။ ပြီးလျင် သင်၏ကျောရိုးအားကို အသုံးပြုပြီးတော့ ပုံပါအတိုင်း ကော့တတ်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက် မြင့်မြင့်ကော့ပါ။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျင် အနည်းဆုံး ၅ စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း သုံးလေးကြိမ်ခန့် ထပ်တလဲလဲ ပြုလုပ်ပေးပါ။
5. Super Cobra Stretch:
Start by keeping your arms perpendicular to the floor and the spine arched (similar to the end position of cobra stretch). Now bending your hips, bring your body up to form an inverted V position. While doing this, tuck your chin against your chest and then return to the original position. Each repetition should last for 10 to 20 seconds.
၅။ ထပ်ဆင့် မြွှေဟောက်ဆန့်ခြင်း
အပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ဆင်တူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုထက်ပိုသည်မှာ ပုံပါအတိုင်း တံတောင်ဆစ်ဆန့်၍ ကော့တတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံပါအတိုင်း ဗီပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။
6. Hopping with One Leg:
Being one of the simplest exercises ever, this can be done anywhere, in the course of any activity like watching TV, playing in the park or while doing any other work. Hop on your left leg eight times with your hands pointing towards the sky and then hop on your right leg in the same way. This bouncing activity is beneficial for brain development, strengthening of legs and generation of growth hormones.
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် အလွယ်တကူဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေးနေရာမရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဘယ်ခြေထောက်ပေါ်တွင် ပုံပါအတိုင်း သင်၏လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ဆွဲမြှောက်ပြီး ညာခြေထောက်ပါအလိုက်သင့် မြှောက်ပေးရပါမည်။ ထို့နောက် ညာဘက်ပေါ်တွင် ခြေထောက် ထောက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်အပေါ်ဘက်သို့လွှဲပြီး ဘယ်ခြေထောက်မြှောက်ပါ။
7. Cat Stretch:
Also known as the Indian Dandwat, this exercise is meant to open up your spine and strengthen your shoulders, chest, palms and back. It basically stretches your hamstrings while puttingastress on your stomach. It is beneficial for blood circulation.
Place your hands and knees on the floor with your arms locked out. Inhale while flexing your spine down and exhale while bringing your spine up into an arched position and your head down. The spine at this position should be arched. Keep your shoulders high and elbows straight. Your pelvic bone should touch the floor. Each repetition should last for3to 8 seconds.
၇။ ကြောင်ကဲ့သို့ အကြောလျော့ခြင်း
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် သင်၏ကျောရိုး၊ ပုခုံး၊ ရင်ဘတ်နှင့် ကျောခုံးများကို သန်မာစေပါသည်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
သင်၏လက်နှင့်ဒူးခေါင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ ထောက်ထားပါ။ သင်၏လက်မောင်းကို ဆန့်ထုတ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အသက်ရှုသွင်းသောအခါ ခါးရိုးကို ကွေးချရမည်ဖြစ်ပြီး အသက်ရှုထုတ်သောအခါ ခါးရိုးကို ဆန့်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့ဆန့်ထုတ်သောအခါတွင် ကွေး၍ခုံးနေရပါမည်။ သင်၏ပုခုံးနှင့် တံတောင်ဆစ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ဆန့်ထားပါ။ ပြီးလျင် သင်၏တင်ပါးအရိုးနှင့်ကြမ်းပြင်ကို ထိအောင် ပြုလုပ်ပြီး နားရပါမည်။ ထိုသို့ ၃ စက္ကန့်မှ ၈ စက္ကန့်အတွင်း ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရပါမည်။
8. The Bow Down:
Stand straight with your hands placed on your hips. Staying in this position, bend forward as far as possible, leading with your head. Always remember not to bend your knees and keep your chin off your chest. Each repetition should last for4to 8 seconds.
သင်၏လက်နှစ်ဘက်ကို တင်ပါးပေါ်တွင်တင်ပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ဦးခေါင်းကို ရှေ့သို့ အာရုံပြုပြီး တတ်နိုင်သလောက်ခါးကို ကုန်းပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်သောအချိန်တွင် ဒူးခေါင်းမကွေးရပါဘူး။ ၄ စက္ကန့် (၈ )စက္ကန့်လောက်ကြာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
9. Forward Bend:
This isawell-known and widely followed exercise to increase height. Stand straight with your legs wide apart. Extend your hands up straight, bend down forward and touch the floor with your hands, without bending your knees. Then return back to the original position.
၉။ ဒူးခေါင်းဖြောင့်၍ခေါင်းနှင့်ခြေ တတ်နိုင်သလောက်ထိအောင်ကွေးခြင်း
ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို အကြောလျော့လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ သင်၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပခုံးအကွာအဝေးအတိုင်း ချဲပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ပြီးလျင် ပုံပါအတိုင်း ကွေးချပါ။
10. Spot Jump:
Keep your legs close and stand on your toe. Now, start jumping with your hand straight up in the air for at least2minutes.